Aung San Suu Kyi Park Åpningsdagens video del (3)အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းခြံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှတ်တမ်း အပိုင်း (၃) ~ စက်တင်ဘာထာဝရ
Dear Mayor of young in city
Aung San Suu Kyi Park Åpningsdagens video del (3)အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းခြံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှတ်တမ်း အပိုင်း (၃)
Credit :Aung San Suu Kyi Park Norway
အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းခြံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှတ်တမ်း အပိုင်း (၃)
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဇွန်လ၊ ၁၉ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၁) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ဖရိုလန်းမြို့ရှိ အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းခြံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှ မှတ်တမ်းဗွီဒီယို အပိုင်း (၃)
၁။ ။ ပန်းခြံအစ သစ်ပင်က
၂။ ။ သစ်တစ်ပင်ခုတ် အချုပ် (၃)နှစ် (ကဗျာရွက်ဖတ်ခြင်း - Salai John Thang Tam Maang)
၃။ ။ Panglong Agreement (ပင်လုံ ကဗျာအား အဂ်လိပ်လို ရွက်ဖတ်ခြင်း - Nicole Maang Cüm Pai)
၄။ ။ ပင်လုံ ကဗျာ ရွတ်ဖတ်ခြင်း (Salai John Thang Tam Maang)
သတင်းမီဒီယာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်မည်သူမဆို ဤ page တွင်ဖေါ်ပြသော ဗွီဒီယိုများ၊ ဓါတ်ပုံများအား ရိုက်ကူးသူနှင့် အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းခြံကော်မတီ Fan page အား ခရစ်တစ်ပေး၍ လွတ်လပ်စွာ ရယူဖြန့်ဝေသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Aung San Suu Kyi Park Åpningsdagens video del (3)
A record of the opening ceremony of Aung San Suu Kyi Park : Part (3)
A video record of the opening ceremony of Aung San Suu Kyi Park in Froland, Norway, on June 19th, 2016, in honorary of the state counsellor of Myanmar, Aung San Suu Kyi’s 71st birthday. (Part 3)
The Origin ofapark isatree
Three Years of Jail For ChoppingaTree ( Poem reading by Salai John Thang Tam Maang)
Panglong Agreement ( Panglong poem reading in English by Nicole Maang Cum Pai)
Panglong Poem Reading by Salai John Thang Tam Maang
Any news and media, organizations, and individuals may freely share any of the pictures and videos from this page by giving credit to the director and the fan page of Aung San Suu Kyi Park committee.
ပေးဆက်သူတို့၏ ရွှေဝါရောင် နှလုံးသား
Burmese monk leader arrives in Bangladesh
“ ရဟန်းတော်များ လမ်းပေါ်ထွက် ၍ ဆန္ဒပြခြင်းသည် မည်သည့်သိက္ခာပုဒ်များနှင့် ငြိစွန်း နေပါသနည်း ”
A Brief note of Speech by Ashin Htavara, Stjørdal City,Norway
“”””Heavenly Culture,World Peace,Restoration of Light in Sweden “””
FELICITATION Ashin Htarwara General Secretary ( All Burma Monks’ Representative Committee)
လန်ဒန်မြေသို့ ခရီးတစ်ခေါက် ဆောင်းပါး ပထမပိုင်း
Joint Statcment of Religious leaders on Freedom of Religion
To The Christian Council of Korea (CCK)